Home News Ciidamo Ka Tirsan Dowlada oo Muqdisho Ku Toogtay Sarkaal Ka Tirsan Ciidanka...
Ciidamo Ka Tirsan Dowlada oo Muqdisho Ku Toogtay Sarkaal Ka Tirsan Ciidanka Xooga Dalka
Wararka inaga soo garayo degmada Dharkinley ee Gobolka Banaadir ayaa shegaya in Sarkaal ka tirsanaa Ciidamadda Xoogga dalka Soomaliyeed in goordhaweyd lagu dilay degmadaas.
Dilkaan ayaa la shegay in ay geysten Ciidamo ka Tirsan kuwa Maamulka Degmadda Dharkinley, oo doonayay in ay si xoog ah kaga raraan dad shacab ahaa dhul ku yaala Xaafadda kaaba-godey ee Degmadda Dharkinley.
Dadka deganka aya sheegay in Sarkaalka la dilay lagu magacaabi jirey Macalin Mangista islamarkaana uu ahaa Tababare ka Tirsanaa Ciidmadda Xoogga dalka Soomaliyeed.
Ciidamadda dilka geystay iyo Sarkaalka ayaa la sheegay in ay murmeen, islamarkaana sarkaalka uu daganaa dhulka ay ciidamadda doonayeen in dadka ka raraan isagana uu damcay in uu is hor istaag uu ku sameeyo.
Wararka aya Sidoo kale shegaya in halkaas ay ku dhintayn sarkaal kale iyo qof rayid ahaa oo ka agdhawa halka falkaasi uu ka dhacay.
Inta badanb muqdisho waxa waxyeelo is gaarsiya ciidamo kawada tirsan kuwa dowlada oo inta badan dagaal uu ku dhex maro qeybo kamid ah magaalada iyado arintaasi ay tahay arin fool xuma ah oo ay dowladu maaro u heli la’dahay.